Le yi-Galaxy Fit, isongo lomsebenzi omusha we-Samsung | Izindaba zamagajethi
Le yi-Galaxy Fit, isongo lomsebenzi omusha we-Samsung
UJose Rubio | | Amadivayisi agqokekayo, Gadgets
AbakwaSamsung basebenzise ithuba le- Umcimbi ongapakishiwe, ngoba ngaphezu kokwethula izingcingo zabo ezintsha ezisezingeni eliphakeme, i- I-Galaxy S10 futhi i I-Galaxy Fold, uphawu lwaseKorea isungule futhi amadivayisi amaningi angeziwe, awaziwa nangokuthi izinyoni. Kanye ne-smartphone eshiwo ngenhla, ne-smartwatch sayo esisha, i- I-Galaxy Active, yethule ama-wristbands wristband amasha ne-Galaxy Fit e.
Yize nge-Galaxy Active sibe nokuvuza okuthile ngaphambi komcimbi, sakwazi ukudala ukulindela ukuthi yini esizoyithola namuhla ku-Unpacked, esimweni se-Galaxy Fit kuhlukile, ngoba imayelana idivayisi obekulindelwe muntu, nokuthi kwenzekani buyisela ububanzi beGear, ukuhlanganisa okwamanje konke okugqokekayo ebangeni le-Galaxy.
1 Imininingwane ye-Galaxy Fit
2 Ishadi lokuqhathanisa le-Galaxy Fit
3 Ukungezwa kububanzi be-Galaxy
4 Amanani nokutholakala
Imininingwane ye-Galaxy Fit
Ngaphakathi kwebanga elisha le-Galaxy Fit, sithola, ngendlela efanayo eyenzeka nge- ISamgung Galaxy S10, eyodwa isibizo esisha esichaza inguqulo eyenziwe lula yomkhiqizo. Lokho okungukuthi, ngaphezu kwe I-Galaxy Fit, I-Galaxy Fit e.
Umehluko phakathi kwazo zombili izinhlobo amanga ikakhulukazi esibukweningokuba ngombala ku-Galaxy Fit futhi omnyama nomhlophe ku-Galaxy Fit e. Futhi sithola, njengomehluko obonakalayo ocacile, a ububanzi obuhlukile bemibala phakathi kwalezi zinguqulo zombili yesongo elisha le-Samsung, ukwazi ukukhetha phakathi okumnyama nesiliva kumodeli ejwayelekile, ngenkathi izinketho zinwebela ku- okumnyama, okumhlophe nokuphuzi kumodeli eshibhile, ukuyinika ukubukeka kwezemidlalo nokungahlelekile ngokwengeziwe.
Kepha kuyacaca ukuthi ndawo thile kuye kwadingeka banciphise emuva ukuze bakwazi ukunikela ngomkhiqizo ngentengo ephansi. Ngaphezu kwesikrini esimnyama nesimhlophe se-Galaxy Fit e, njengoba sizobona kuthebula lokuqhathanisa elingezansi, siyathola ukuphakama kwephikseli ephansi. Lokhu mhlawumbe esikrinini esincane kangako akubalulekile njengoba kungaba kwi-smartphone, kepha imininingwane okufanele uyicabangele.
Ngendlela efanayo umehluko we-RAM, ophindwe kane ku-Galaxy Fit ngokuqhathaniswa nemodeli e, kanye ibhethri ihlupheka cishe ngama-50% kule modeli yakamuva, ifika kuze kube yisonto lonke phakathi komthwalo nomthwalo okungenani.
Ishadi lokuqhathanisa le-Galaxy Fit
I-Galaxy Fit e
Color Okumnyama-Isiliva Mnyama-Mhlophe-Ophuzi
Isikrini 0.95 "Umbala Ogcwele AMOLED 0.74 "I-PMOLED
Isinqumo I-120 x 240 - 282 ppi I-64 x 128 - 193 ppi
Umseshi I-MCU Cortex M33F 96MHz + M0 16 MHZ I-MCU Cortex M0 96MHz
Tamaño X x 18.3 44.6 11.2 mm X x 16.0 40.2 10.9 mm
Isisindo ngentambo I-24 amagremu I-15 amagremu
RAM I-512 KB + 2048 KB 128 KB
Isitoreji I-32MB ROM I-4MB ROM
Ibhetri 120 mah 70 mah
Izinzwa I-Pulse + Accelerometer + Gyroscope I-Pulse + Accelerometer
Carga I-NFC engenantambo Pogo
Ukuphikiswa 5ATM MIL STD 810G 5ATM MIL STD 810G
Ukungezwa kububanzi be-Galaxy
Ngokungafani ne-Samsung Gear Fit neGear Fit 2, i- IGalaxy Fit inesikrini esicaba, ishiya ngemuva isikrini esigobile sabandulelayo. Ngale nto yokwakha win ngokulula futhi ivumela ukulondolozwa kwezindleko okungangabazeki ukuthi umsebenzisi wokugcina azokwazisa, kungakhathalekile uhlobo abalukhethayo.
Nembangi entsha yendlovukazi yamasongo omsebenzi, iXiaomi Mi Band, AbakwaSamsung banethemba lokuqhubeka nokwandisa indawo yabo emakethe, enikezela ngomkhiqizo ogama lakhe liyisiqinisekiso sekhwalithi, njengoba kunjalo kulo lonke uhla lomkhiqizo we-Galaxy, kulabo basebenzisi okungenzeka ukuthi abakwazi ukukhokha inani elikhulu lemali ngokuthengwa kwento ebizosetshenziswa, noma abafuna yochungechunge lwe Izici ezilula kunokunikezwa kwe-smartwatch, Njenge entsha I-Galaxy Active.
Yize ngaphandle kokungabaza, i-Galaxy Fit iyi kugxile ekuqapheni okuyisisekelo ngesikhathi sokuqeqeshwa kwezemidlalo, kuqala ngerekhodi lomsebenzi ngamunye njalo lapho siqala ukukwenza, ngaphandle kokusetha noma ukumisa noma iyiphi ipharamitha kusongo lwethu. Vele, futhi iyakwazi qapha ukulala kwethu nokushaya kwenhliziyo, isinika imininingwane mayelana nalokhu, kanye amathiphu okuthuthukisa impilo yethu.
Noma kunjalo AbakwaSamsung abakakaqinisekisi amanani asemthethweni, Uhla lwamanani alo kulindeleke ukuba lube phakathi kwe- cishe ama- € 30 abiza iXiaomi Mi Band, umncintiswano wawo omkhulu, nokungaphezulu kwe- € 130 okubiza iGear Fit 2 yamanje. Usuku lokukhishwa nalo aluqinisekisiwe., yize kungeke kube okungenangqondo ukucabanga ukuthi izotholakala kusuka ngoMashi 8 ozayo, njengoba kuzokwenzeka ngewatchwatch entsha yomndeni wakwaGalaxy, iGalaxy Active.
Yiba njalo, kungekudala umndeni we-Galaxy uzokhula ujwayele izidingo zomsebenzisi ngamunye, futhi asingabazi ukuthi i-Galaxy Fit entsha, kanye nohlobo lwayo olwenziwe lula, i-Galaxy Fit e, izoba amamodeli athandwa kakhulu futhi asabalele kubathengi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » Le yi-Galaxy Fit, isongo lomsebenzi omusha we-Samsung
Ukuqhathanisa phakathi kwe-Galaxy S10, S10 + ne-S10e
Hlangana namahedfoni we-bluetooth we-Samsung Galaxy Buds